Dowladda Mareykanka oo dooneysa in ay wada hadal la gasho Sheikh Xasan Daahir Aweys. | JILYAALE_ONLINE
Dowladda Mareykanka oo dooneysa in ay wada hadal la gasho Sheikh Xasan Daahir Aweys.
Warar aanu ka helnay rag rag ku dhow dhow Isbahaysiga dib u xoreynta Soomaaliya garabka uu hogaamiyo Sheekh Xasan Daahir Aweys ayaa waxay noo sheegeen in Dowladda Mareykanka ay dooneyso in ay wada hadal la gasho Garabkiisa si loo soo afjaro xaaladda murugsan oo ka taagan dalka Soomaaliya.
“Waxaa maalmahan socday xiriiro hoose oo u dhexeeyey Sheekh Xasan iyo Dowladda Mareykanka kuwaas oo aan weli si rasmi ah u soo shaac bixin” ayuu yiri mid ka mid ah Isbahaysiga Asmara oo sheegay in Dowlada Mareykanka ay ogaatey in Sheekh Xasan uu yahay nin miisaan culus ku leh arrimaha Soomaaliya taageerayaal fara badana ku leh dalka Soomaaliya.
Wada hadalka ay Dowladda Mareykanku ku dooneyso in ay la yeelato Sheekh Xasan ayaa waxa soo if baxay markii ciidamadii Qaramada Midoobey ee ku kala dhex jiray Itoobiya iyo Ereteriya,ay halkaa ka baxeen iyadoo Dowladda Mareykanka ay ka cabsaneyso in uu qarxo mar kale dagaal dhex mara Ereteriya iyo Itoobiya, iyadoo Ciidamada Itoobiya ku sugan yihiin gudaha dalka Soomaaliya.
Dowladda Mareykanka waxay markaan dooneysaa in dib u heshiisiin ay ka dhex sameyso dhinacyada isku haya Soomaaliya si dowladda Mareykanka ay culeyska uga yareyso Dowladda Itoobiya oo iyadu markii hore Itoobiya ku qalqaalisay in ay ciidamadeedu galaan gudaha dalka Soomaaliya.
Dowladda Mareykanka waxay horey u taageertay shirkii dib u heshiisiinta ee ka dhacay Magaalada Jabuuti hase yeeshee dowladda Mareykanka waxa ay sheegtay in haddii Sheekh Xasan Daahir Aweys laga helo dabacsanaan laga saari doono liiska Argagixisada waxay kaloo dowladda Mareykanka garwaaqsatay in heshiiskii ka dhacay Jabuuti uu yahay heshiis kala dhiman loona baahan yahay in la dhameystiro dhinacyada Soomaaliya isku hayana hal meel la isugu keeno.
Isku soo wada duuboo heshiiskii Jabuuti ayaa waxaa ka biyo diiday Sheekh Xasan Daahir Aweys taasina waxay keentay in uu laba garab kala noqdo Isbahaysiga sidoo kael waxaa iyana kala booday Madaxweyne C/llaahi Yuusuf iyo Ra’isul wasaare Nuur Cadde, taas oo wax u nimeysa heshiiskii Jabuuti, hase yeeshee ummadda Soomaaliyeed ayaa aaminsan in haddii uu Mareykanku daacad ka yahay heshiisiinta Ummadda Soomaaliyeed ay wax waliba hagaagayaan.
← Dowladda Ethiopia oo dhabarka u jeedisay khilaafka u dhexeeya Madaxda sare ee dowladda KMG.
Khilaaf xoogan oo soo kala dhex galay dowlada KMG ah iyo dowlada Mareykanka.. →